Nin ka danbeeyay weerarkkii kooxda Bourssia Dortmund oo la qabtay
By Mahad Maxamed Cabdulle , Garowe Online
Sergei oo ah nin u dhashay dalka Jarmalka balse heysta dhalasho Ruushka ah ayaa qirtay in uu ka dambeeyay weerar bishii April ee sanadkii la soo dhaafay lagu qaaday Gaari ay la socdeen ciyaartooyda Borussia Dortmund.
Ninkan ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla Galbeedka dalka Jarmalka, isagoo sheegay in uusan u qaadin weerarkaasi inuu qof dilo isla markaana uu ka shalanaayo ficilka uu fuliyay.
Weerarkan ayaa dhacay 11-kii April 2016 waxaana mar qura bambo gacmeed lagu tuuray gaari ay la socdeen ciyaartooyda Borussia Dortmund, waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay xidiga xulka Spain ee Marc Bartra oo xiligaasi dhaawac fudud uu gacanta ka soo gaaray.
28 jirkan qirtay in weerarka uu ka danbeeyay ayaa sheegay in uusan si u kala kac ah ugu qaadin kooxda laakiin uu damacsanaa in weerar ka fuliyo meel aan ka fogeen halka uu taagnaa gaariga kooxda Borussia Dortmund oo xiligaasi isku diyaarineysay kulan Campions League.
Maxkamada ayaa sheegtay in wali ay socon doonto dhageysiga kiiska isla markaana lagu dhawaaqi doono ciqaabta uu muteysto Sergei markale maadaama uu qirtay in uu galay fal danbiyeed.
Liverpool oo ku Guuleysatay saxiixa Virgil van Dijk
Cayaaraha 28.12.2017. 11:20
Liverpool ayaa ku dhawaaqday saxiixa daafacii Southampton Virgil Van Dijk oo aduun dhan...
Warar ku saabsan Isku aadka wareega 16-ka Champions League
Cayaaraha 07.12.2017. 10:24
Isku aadka wareega 3aad ee FA Cup oo la sameeyay
Cayaaraha 05.12.2017. 11:16
Chelsea oo Guul muhiim ah ka gaartay kooxda Newcastle United
Cayaaraha 02.12.2017. 18:36
Luis Suarez oo Ganacsi cusub ka furtay Magaalada Barcelona
Cayaaraha 02.12.2017. 18:13
Hordhaca Kulanka Arsenal iyo Manchester United
Cayaaraha 02.12.2017. 15:11
Gareth Bale oo Heshiis horudhac ah la gaaray Manchester United
Cayaaraha 15.12.2017. 23:15
Manchester United oo Nemanja Matić weyn karta kulanka Arsenal
Cayaaraha 30.11.2017. 15:30